नायिका स्वेता खड्काले खोलिन् पहिलोपटक आफ्नो जीवनको रहस्य, के अब बिहे गर्छिन त??? -
नायिका श्वेता खड्का आम महिलाहरुका लागी धैर्यताको एक ज्वलन्त उदाहरण हुन् । जो जीवनमा आइपर्ने ठूलो दुख र अप्ठ्यारोमा पनि जीवन बाँच्ने संभावना र समाजका लागी उत्प्रेरणा बनेकी छिन् । करिब ३ वर्षअघि पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई गुमाएपछि उनी केही समय प्रभावित भएपनि पुन संघर्षको मैदानमा नै उपस्थि भएकी छिन् ।
कोहिनुर चलचित्रमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँगै अभिनय गरेर ब्यापक चर्चा कमाएकी श्वेताले श्रीकृष्णको निधनपछि केही सामाजिक कामहरुको थालनी गरेसँगै चलचित्र निर्माणमा समेत गरेकी छिन् । उनले निर्माण गरेको चलचित्र कान्छी’ आउँदो फागुन ४ गते प्रदर्शनमा आउँदैछ ।
Previous जहिले पनि यी राशी हुनेसँग सम्बन्ध राख्नुहोस्, चम्किनेछ तपाईको भाग्य !
Next १८ वर्षीय युवतीको पाकेटमार ग्यांग, चोरेको मोबाइल बेच्न पसल नै खोलेको रहस्य